အာဂယောက်ျား ရှာမှရှား သူ့နာမည်က “တောက်ထိန် “ – WunYan
အာဂယောက်ျား ရှာမှရှား သူ့နာမည်က “တောက်ထိန် “
Posted on November 8, 2018 by whuk-46651
သူ့ နာမည်က “တောက်ထိန် ” အများခေါ်သည်က “ဘိုတောက် “။ သူသိသူကိုဖြစ်စေ မသိသူကိုဖြစ်စေ ကွမ်းချေးအထပ်ထပ်ကပ်နေတဲ့ သွားကြဲကြဲကြီးတွေပေါ်သည်အထိ ရယ်ပြလေ့ရှိသည်။
အလှူ ၊ မင်္ဂလာဆောင် ၊ သာရေး ၊နာရေးမှန်သမျှ ဘယ်သူဖိတ်ဖိတ် မဖိတ်ဖိတ် “တောက်ထိန်” တို့က စောစီးစွာ ရောက်လာမြဲ ရေနွေးအိုးကျို ၊ မီးထိုး ၊ ရေသယ် ၊ ထင်းခွဲကအစ တံမြက်လှည်းအဆုံး မခိုင်းသော်ငြား “တောက်ထိန်”၀င်ကူသည်ခြင်းသာ.. သူ့အဖြစ်က ကောင်းသည်ဟုမဆိုသာသလို ရူးသည်ဟုလည်း မပြောသာ…
သာမန်လူတွေထက် ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပါးရှာတဲ့ သူ့ဘ၀ကို အများက စာနာသနားကြသော်ငြား ” တောက်ထိန်” တို့က ၀မ်းမနည်း.. ဘယ်​အချိန်​ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် သူ့မျက်နှာက ပြုံးတုံးတုံး… လောဘ မောဟ ​ဒေါသ တရားတွေကင်းသော “တောက်ထိန်” ပါတကား…
မိသားစုမှာ မိခင်ရှိသေးသော်လည်း အစ်မ မိသားစုနဲ့နေသည်မို့ တခါတရံမှသာ သူသွား၏။ သူအနေများသည်က “မုခ်ထုပ် “ဘုန်းကြီး​ကျောင်း တွင်သာ.. ဘုန်းကြီး​ကျောင်းမှာ အများသူငါ လှူကြတန်းကြချိန် ​တောက်​တိုမည်​ရ လုပ်ပေးနေတဲ့ သူ့ရင်ထဲ ကိန်းအောင်းလာသည်က ဒါနစိတ်ကလေး…
နောက်နေ့ကစလို့ ရပ်ကွက်ထဲ ဈေးထဲမှာ မောင်းထောင်ချိုင့် တစ်လုံးနှင့် ၅ကျပ် ၁၀ကအစ သူအလှူခံထွက်တော့၏။ ဘာအတွက်အလှူခံမှန်း မသိသော်ငြား ” တောက်ထိန် “အလှူခံလာပြီဟေ့ဆိုသည်နှင့် နည်းများမဆို လှူလိုက်ကြသူချည်းသာ…
၀ါးလုံးတစ်ပိုင်းကိုထောင် …ဘေးက ၀ါးတန်းလေး ခနော်နီ ခနော်နဲ့မှာ အလှူခံရလာတဲ့ ပိုက်​ဆံလေးတွေကို ကြိုးနဲ့သီပြီး ဆိုက်ကားဂိတ်ရှေ့တည့်တည့်မှာ လာထောင်ထားမှ ပဒေသာပင် အတွက် အလှူခံမှန်း သိလိုက်ရတော့သည် ။
အနားက ဆိုက်​ကားဆရာတွေက “တောက်ထိန် ” ပဒေသာပင်ကို ၀ိုင်းဝန်းသီကြ ပြု ကြ …လမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်း ကုသိုလ်​ယူထည့်ဝင်သွားကြရာ “တောက်ထိန် ” ပဒေသာပင်မှာ ပြည့်စုံသွားတော့၏ ။
ကြံခင်း မြို့မဈေး ကထိန်မှာ “တောက်ထိန် “က သူ့ပဒေသာပင် သူထမ်းရင်း ကထိန်လှည့်လိုက်သည်…. ဟိုးအရင်က လက်လှည့် ပဒေသာပင်လေးကို ဘုန်းကြီး​ကျောင်း တစ်ကျောင်းပြီး တစ်ကျောင်း ကပ်လိုက် ပြန်ယူလိုက် နောက်တစ်ကျောင်း ကပ်လိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေသော်ငြား အခုတော့ “မရမ်းချို “ဘုန်းတော်ကြီး​ကျောင်း ကို သီးသန့်လှူ ခဲ့သည် ။ မြင်ရကြားရသူအပေါင်းမှာ ” တောက်ထိန် “အလှူအတွက်​ ပီတိမျက်ရည်ပင် ၀ဲကြရသည်။
ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်တည်းက ” တောက်ထိန်”တစ်ယောက် တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက် အလှူခံထွက်ပြန်လေပြီ … ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားတွေက စုပေါင်းပြီး ပဒေသာပင်သီးပေးလိုက်၏။ ဒါကိုတော့ “ထန်းကုန်း”ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို သွားလှူလိုက်၏။
နောက်ဆိုက်ကားဂိတ်မှာ ပဒေသာပင်စိုက်ထားပြန်ရာ စုပေါင်းစပ်ပေါင်းကုသိုလ်ဖြင့် သူနေသော “မုခ်ထုပ် “ကျောင်းကို လှူလိုက်ပြန်သည် ။ မြို့မ ဈေးကထိန်မှာ လိုက်ဖို့ “တောက်ထိန် “က သူ့ပဒေသာပင်ကို ဈေးပေါက်ဝနားမှာ စိုက်ထားလိုက်ပြန်သည် ။ သူကတော့ ဈေးထဲပတ်ချာလည် အလှူခံထွက်လိုက် ပြန်လာပြီး ပဒေသာပင်မှာ သီလိုက်..အနားနီးပါးဆိုင်တွေကလည်း သူ့ပဒေသာပင်မှာ လှူကြ ကူညီလုပ်ပေးကြနှင့် ပဒေသာပင်တစ်ခု ဖြစ်မြောက်သွားပြန်သည် ။
ဈေးကထိန်လှည့်ပွဲမနက်မှာတော့ ” မောင်တောက်ထိန် ပဒေသာပင်” ဟူသော စာတန်းပါ ပဒေသာပင်တင်ထားတဲ့ ဆိုက်​ကားဘေးမှာ အ၀တ်​အစား သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​နှင့် “တောက်ထိန် “မျက်နှာက တပြုံးပြုံး … ဈေးကထိန်အလှည့်ကျသော တောရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို သူမလိုက်…။
မနှစ်က သူလှူခဲ့သော ” မရမ်းချို “ကျောင်းတိုက်ကိုသာ သူ့ပဒေသာပင်ကို ထမ်းချသွား၏ ။ သာမန်​လူကောင်းတွေပင် ပဒေသာပင် (၃ )ပင် လှူဖို့ အတော်အားထုတ်ရမည့်အရာကို “တောက်ထိန် “က ကထိန်ရာသီအတွင်း ပဒေသာပင် (၃)ပင်ကို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၃)ကျောင်းကို လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီ…
ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပါးသော်ငြား စေတနာ သဒ္ဓါတရား ပြည့်ဝသော ” တောက်ထိန် “ရဲ့ မွန်​မြတ်​လှသော အလှူဒါနကို အခါခါပင် သာဓုခေါ်မိရသည် ။ သာမန်​လူတို့ ပြုနိုင်ခဲသော အလုပ်ကို ” တောက်ထိန် “က လုပ်ဆောင်ပြခဲ့ပေပြီ…. အာဂယောက်ျား…ရှာမှရှားသည့်သူ ဟုသာ ကမ္ဗည်းတင်လိုက်ချင်ပါတော့သည်။
Credit : ကြံခင်းသူ
သူ့နာမညျက “တောကျထိနျ ” အမြားချေါသညျက “ဘိုတောကျ “။ သူသိသူကိုဖွဈစေ မသိသူကိုဖွဈစေ ကှမျးခြေးအထပျထပျကပျနတေဲ့ သှားကွဲကွဲကွီးတှပေျေါသညျအထိ ရယျပွလရှေိ့သညျ။
အလှူ ၊ မင်ျဂလာဆောငျ ၊ သာရေး ၊နာရေးမှနျသမြှ ဘယျသူဖိတျဖိတျ မဖိတျဖိတျ “တောကျထိနျ” တို့က စောစီးစှာ ရောကျလာမွဲ ရနှေေးအိုးကြို ၊ မီးထိုး ၊ ရသေယျ ၊ ထငျးခှဲကအစ တံမွကျလှညျးအဆုံး မခိုငျးသျောငွား “တောကျထိနျ”ဝငျကူသညျခွငျးသာ.. သူ့အဖွဈက ကောငျးသညျဟုမဆိုသာသလို ရူးသညျဟုလညျး မပွောသာ…
သာမနျလူတှထေကျ ဉာဏျရညျနိမျ့ပါးရှာတဲ့ သူ့ဘဝကို အမြားက စာနာသနားကွသျောငွား ” တောကျထိနျ” တို့က ဝမျးမနညျး.. ဘယျအခြိနျကွညျ့လိုကျကွညျ့လိုကျ သူ့မကျြနှာက ပွုံးတုံးတုံး… လောဘ မောဟ ဒေါသ တရားတှကေငျးသော “တောကျထိနျ” ပါတကား…
မိသားစုမှာ မိခငျရှိသေးသျောလညျး အဈမ မိသားစုနဲ့နသေညျမို့ တခါတရံမှသာ သူသှား၏။ သူအနမြေားသညျက “မုချထုပျ “ဘုနျးကွီးကြောငျး တှငျသာ.. ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ အမြားသူငါ လှူကွတနျးကွခြိနျ တောကျတိုမညျရ လုပျပေးနတေဲ့ သူ့ရငျထဲ ကိနျးအောငျးလာသညျက ဒါနစိတျကလေး…
နောကျနကေ့စလို့ ရပျကှကျထဲ ဈေးထဲမှာ မောငျးထောငျခြိုငျ့ တဈလုံးနှငျ့ ၅ကပျြ ၁၀ကအစ သူအလှူခံထှကျတော့၏။ ဘာအတှကျအလှူခံမှနျး မသိသျောငွား ” တောကျထိနျ “အလှူခံလာပွီဟဆေို့သညျနှငျ့ နညျးမြားမဆို လှူလိုကျကွသူခညျြးသာ…
ဝါးလုံးတဈပိုငျးကိုထောငျ …ဘေးက ဝါးတနျးလေး ခနျောနီ ခနျောနဲ့မှာ အလှူခံရလာတဲ့ ပိုကျဆံလေးတှကေို ကွိုးနဲ့သီပွီး ဆိုကျကားဂိတျရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ လာထောငျထားမှ ပဒသောပငျ အတှကျ အလှူခံမှနျး သိလိုကျရတော့သညျ ။
အနားက ဆိုကျကားဆရာတှကေ “တောကျထိနျ ” ပဒသောပငျကို ဝိုငျးဝနျးသီကွ ပွု ကွ …လမျးသှားလမျးလာတှကေလညျး ကုသိုလျယူထညျ့ဝငျသှားကွရာ “တောကျထိနျ ” ပဒသောပငျမှာ ပွညျ့စုံသှားတော့၏ ။
ကွံခငျး မွို့မဈေး ကထိနျမှာ “တောကျထိနျ “က သူ့ပဒသောပငျ သူထမျးရငျး ကထိနျလှညျ့လိုကျသညျ…. ဟိုးအရငျက လကျလှညျ့ ပဒသောပငျလေးကို ဘုနျးကွီးကြောငျး တဈကြောငျးပွီး တဈကြောငျး ကပျလိုကျ ပွနျယူလိုကျ နောကျတဈကြောငျး ကပျလိုကျနဲ့ သံသရာလညျနသေျောငွား အခုတော့ “မရမျးခြို “ဘုနျးတျောကွီးကြောငျး ကို သီးသနျ့လှူ ခဲ့သညျ ။ မွငျရကွားရသူအပေါငျးမှာ ” တောကျထိနျ “အလှူအတှကျ ပီတိမကျြရညျပငျ ဝဲကွရသညျ။
ဒီနှဈ သီတငျးကြှတျလပွညျ့ကြျောတညျးက ” တောကျထိနျ”တဈယောကျ တဈလမျးဝငျတဈလမျးထှကျ အလှူခံထှကျပွနျလပွေီ … ရပျကှကျသူ ရပျကှကျသားတှကေ စုပေါငျးပွီး ပဒသောပငျသီးပေးလိုကျ၏။ ဒါကိုတော့ “ထနျးကုနျး”ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးကို သှားလှူလိုကျ၏။
နောကျဆိုကျကားဂိတျမှာ ပဒသောပငျစိုကျထားပွနျရာ စုပေါငျးစပျပေါငျးကုသိုလျဖွငျ့ သူနသေော “မုချထုပျ “ကြောငျးကို လှူလိုကျပွနျသညျ ။ မွို့မ ဈေးကထိနျမှာ လိုကျဖို့ “တောကျထိနျ “က သူ့ပဒသောပငျကို ဈေးပေါကျဝနားမှာ စိုကျထားလိုကျပွနျသညျ ။ သူကတော့ ဈေးထဲပတျခြာလညျ အလှူခံထှကျလိုကျ ပွနျလာပွီး ပဒသောပငျမှာ သီလိုကျ..အနားနီးပါးဆိုငျတှကေလညျး သူ့ပဒသောပငျမှာ လှူကွ ကူညီလုပျပေးကွနှငျ့ ပဒသောပငျတဈခု ဖွဈမွောကျသှားပွနျသညျ ။
ဈေးကထိနျလှညျ့ပှဲမနကျမှာတော့” မောငျတောကျထိနျ ပဒသောပငျ” ဟူသော စာတနျးပါ ပဒသောပငျတငျထားတဲ့ ဆိုကျကားဘေးမှာ အဝတျအစား သပျသပျရပျရပျနှငျ့ “တောကျထိနျ “မကျြနှာက တပွုံးပွုံး … ဈေးကထိနျအလှညျ့ကသြော တောရ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးကို သူမလိုကျ…။
မနှဈက သူလှူခဲ့သော ” မရမျးခြို “ကြောငျးတိုကျကိုသာ သူ့ပဒသောပငျကို ထမျးခသြှား၏ ။ သာမနျလူကောငျးတှပေငျ ပဒသောပငျ (၃ )ပငျ လှူဖို့ အတျောအားထုတျရမညျ့အရာကို “တောကျထိနျ “က ကထိနျရာသီအတှငျး ပဒသောပငျ (၃)ပငျကို ဘုနျးတျောကွီးကြောငျး (၃)ကြောငျးကို လှူဒါနျးနိုငျခဲ့ပွီ…
ဉာဏျရညျနိမျ့ပါးသျောငွား စတေနာ သဒ်ဓါတရား ပွညျ့ဝသော ” တောကျထိနျ “ရဲ့ မှနျမွတျလှသော အလှူဒါနကို အခါခါပငျ သာဓုချေါမိရသညျ ။ သာမနျလူတို့ ပွုနိုငျခဲသော အလုပျကို ” တောကျထိနျ “က လုပျဆောငျပွခဲ့ပပွေီ…. အာဂယောကျြား…ရှာမှရှားသညျ့သူ ဟုသာ ကမ်ဗညျးတငျလိုကျခငျြပါတော့သညျ။
Credit : ကွံခငျးသူ